अर्कै लोकतन्त्र ल्याऊ | गृहपृष्ठ
Home तीतो मीठो अर्कै लोकतन्त्र ल्याऊ
भरतपुर १९ मा मतपत्र च्यात्ने माओवादीका कार्यकर्तालाई झ्यालखानामा लगेर कोच्नुको सट्टा उल्टो त्यस्ता क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्ने फैसला सर्वोच्चबाट आएकाले ‘साधुलाई सुली, चोरलाई फुली’ भनेजस्तो भयो रे । यो फैसलाको नजीरले लोकतन्त्रको स्वास्थ्यमा हानि गर्छ रे । यस्तै यस्तै के रे के रे भनेर एक थरी मानिसहरु कुर्लिरहेका छन् ।
अब जजसले आफ्ना लागि लोकतन्त्र ल्याएको हो, उसले आफ्नै फाइदाका लागि गरेको गतिविधिलाई लिएर विरोध गर्नुको कुनै तुक हुन्छ ? आफूलाई यस्तो लोकतन्त्र मन नपर्ने भए अर्कै खालको ‘कान्छी लोकतन्त्र’ ल्याए भैहाल्थ्यो नि । अर्काले ल्याएको ‘साइँली लोकतन्त्र’मा खोट देखाएर यो भएन, त्यो भएन भन्न पाइन्छ ?
एउटाले भोट हाल्या’थ्यो, अर्कोले च्यात्यो, त्यसमा तेस्रो पक्षका अरुलाई वा सर्वोच्चलाई के मतलव र भन्या ? त्यसमा पनि सर्वोच्चजस्तो सम्मानित अदालतको फैसलाको विषयमा चूँ बोल्नसम्म पनि नपाइनेमा आफूलाई विद्वान् भनाउँदाहरु उसको फैसलाको विषयमा जथावाभी लेखिहिँड्न, बोल्न पो थालेका छन् बा ! होइन, हिजोआजका मानिसहरुलाई के भएको छ कुन्नि !
त्यस्तै, केही सभासद्हरुसमेत अर्काथरी मानिसहरु यो कर पर्छ्यौट आयोग हुनु हुँदैनथ्यो भनेर पनि अहिले आएर क्याउँक्याउँ गर्न थालेका छन् । त्यो आयोग बनाउँदा चैं सुतेर बसेका थिए र अहिले त्यसको विरोध गर्नलाई ? नानाथरी प्रश्न गर्ने भए प्रश्न त अरु पनि थुप्रै बाँकी नै छन् नि त । जस्तै, जनताबाट उठाएको पैसा हजम गरेको र सरकारबाट आसचपु चप्काएको एउटै कुरा हो कि फरक हो ? त्यस्तै, जजसले कर फर्छ्यौट आयोगबाट छूट पाए, राज्य कोषबाट लुट्न पाए, अब त्यो पैसा फेरि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कि नपर्ने ? यस्ता थुप्रै प्रश्न र तिनका उत्तर पनि बाँकी नै छन् । अब तिनका उत्तर चैं कसले दिने ? त्यसैले ‘कुकुरलाई मासुपैंचो दिएमा उसले त्यो फिर्ता गर्छ कि गर्दैन’ भनेजस्तै बेतुकका प्रश्न सोधेर मात्र के गर्ने, प्रश्नको उत्तर कतैबाट नआउने भएपछि ?
यसैबीच अहिले फेरि अर्को प्रश्न पनि उठिसकेको छ । त्यो के भने सरकारले राखेको लक्ष्यअनुसार कर नउठ्ने भो रे । अब सरकारले के गर्ला त ? उत्तर स्पष्ट छ । जजसले कर तिरिरहेका छन, तिनैलाई अझ निचोरेर उठाउँछ । चूडामणि शर्माले तिर्नुपर्छ भनेको १० अर्ब उनले पक्कै तिर्नेवाला छैनन् । १/२ वर्ष जेल बसिदियो भने त्यो सबै पैसा पच गर्न पाइन्छ । अस्ति भर्खर सशस्त्रका तीन पूर्वआईजीपीले पनि त्यसै गरेका छन् । पहिले पहिलेका भीआईपीहरुले पनि उसै गरेका हुन् । जेलमै यसो एकाध वर्ष, त्यो पनि राजकीय ठाँटका साथ बसेर अर्बौं रुपैयाँ हजम गर्न पाउने कानून भएसी को जान्ने बनेर आफूसँग आइसकेको पैसा सरकार भनाउँदोलाई तिरेर जेलबाट छुट्छ र ?
दिनदहाडै डकैती शैलीमा राज्यकोषमा लूट मच्चिरहेको आफै साक्षी हुँदाहुँदै पनि केही सभासद् अहिले आएर पो प्रश्न गर्न थालेका छन्, ‘खुरु खुरु उपभोक्ताबाट भ्याट उठाउने अनि आफ्नै खल्ती र पेट भर्ने गर्न पाइन्छ ?’ भनेर । ए बाबा, लोकतन्त्र केका लागि बनाएको हो त ? लोकतन्त्र भनेको यस्तो मनचिन्ते भाँडो हो कि जजसले जे सक्छ, यसबाट लिने हो । लोकतन्त्र सक्नेका लागि लाभतन्त्र हो भने नसक्नेका लागि लोभतन्त्र मात्र हो – टाढैबाट अरुले खाएको हेरेर र्‍याल काढ्ने । कसैका लागि यो लूटतन्त्र हो भने कसैका लागि फुटतन्त्र हो । कुरा बुझ्नेका लागि यो जोकतन्त्र हो भने नबुझ्ने निरीहका लागि यो ठोकतन्त्र हो । सामान्य जनता, पहुँच नभएका गरीब, निमुखा, कुनै दलका सिफारिशमा नपर्नेका लागि यो केवल भोक, रोग र शोकतन्त्र मात्र हो । जर्ज अरवेलले भनेजस्तो, ‘सीमित केही तर अरुभन्दा अलि बढी समान’ हैसियतका राजनीतिक जन्तुका लागि यो गणतान्त्रिक लोकतन्त्र गनतन्त्र र धनतन्त्र हो । यो उनीहरुका लागि मात्र ल्याईएको हो । र यो माथिकालाई सत्ता, भत्ता, अनेकौं सुविधासहित करोडौंका गाडी हो, बाँकी तलकालाई खाडी हो । यो तन्त्रमा अरुले आफ्नो भाग खोज्नु बेकार हो । आफ्ना लागि चाहिने भए आफूलाई चाहिनेखालको छुट्टै लोकतन्त्र आफैंले ल्याउनु परो नि त । हैन र भन्या ?